FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA BAGLE HOUND DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Bagle Hound Dog
Alika mifangaro Basset Hound / Beagle mifangaro
'Ity no Bagle keliko, Zo-Wee, fifangaroan'ny Beagle ary Basset Hound. Zo-Wee dia manana toetra bebe kokoa noho ny olona fantatro. Ity sary ity dia mampiseho azy amin'ny 6 taona. Ny lokony dia tsy dia tononina amin'ny tarehiny toy ny tamin'ny fahatanorany. Milanja 28 kilao izy ary manana angovo tsy manam-petra arahin'endrika snooze mandritra ny ora maro. Miresaka ny zava-drehetra izy ary indraindray mitafy vozon'akanjo citronella satria mety ho somary mafy ny hafanam-pony. Nandritra ny androm-piainany dia salama tsara izy, fa toa an'i Basset Hounds, dia mila fanadiovana matetika ny sofina. Izy no alika mamy indrindra fantatro! '
Ny alika Bagle Hound dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Basset Hound ary ny Beagle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Bailey ilay vehivavy Bagle Hound eo amin'ny 3 volana eo ho eo miaraka aminy kilalao tady . Izy dia mifangaro amin'ny vorona Beagle sy Basset -'Milaza izy ireo fa tokony ho 30 ka hatramin'ny 45 lbs. Alika mahery be sy be fitiavana izy ary ny orony no mitarika ny alehany :) '
Leo the Bagle Hound (Basset Hound / Beagle mix) amin'ny 6 taona
Indiana ilay lokon-koditra Bagle Hound miloko (Basset Hound / Beagle mix) amin'ny 5 taona
Bagle Hound sary pejy 1
Bagle Hound Sary Pejy 2
Lisitry ny Alika mifangaro Basset Hound
amerikana bulldog pitbull terrier mix
amboa miteraka lbs 50 lbs
St Bernard Cocker Spaniel Mix
4 volana rottweiler alika